Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Waraabe Oo maalinimad-kii shalay dib ugu soo laabtay dalka, ayaa isla maantaba waxaa uu kormeer ku soo sameeyay goobaha Diinwaangalintu ka socoto ee Maroodijeex. | Xibiga Ucid
Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Waraabe Oo maalinimad-kii shalay dib ugu soo laabtay dalka, ayaa isla maantaba waxaa uu kormeer ku soo sameeyay goobaha Diinwaangalintu ka socoto ee Maroodijeex.
Hargeysa (UCID-Media Group) Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Waraabe Oo maalinimad-kii shalay dib ugu soo laabtay dalka, ayaa isla maantaba waxaa uu kormeer ku soo sameeyay goobaha Diinwaangalintu ka socoto ee Maroodijeex.
Waxaa Gudoomiyaha kormeerkan ku wehelinayay, madax isugu jirtay, xog-hayayaal, Murashaxiin iyo masuuliyiin kale.
Guddoomiyaha ayaa u kuur-galayay habsami u socod-ka Diinwaangalinta.
Guddoomiye ayaa haddana isla caawa ku soo hoyday Berbera, sii uu barri kormeer ugu soo sameeyo goobaha diinwaangalinta Gobolka Saaxil Iyo Degmada Sheekh.